Soo Iibso Suunka Spaghetti Bodycon Lace Faashadda Mini Dharka Cad - Dhoofinta Bilaashka Ah & Canshuur La'aan | WoopShop®
Xilliga: Xagaaga, Dayrta, Jiilaalka, Guga
Waxyaabaha: Polyester, Spandex, Lace
Nambarka Tusaalaha: 92008
Xusuusin: Qalalan oo nadiif ah, Ha laaban ama cadaadis, Ha sudho hangool
Midabka: Dharka Faashadda Cad
Fiiro gaar ah: Cabbiraadaha ku yaal shaxda cabbirka waxaa loogu talagalay jirka ee ma aha dharka. Fadlan si adag u raac shaxankayaga cabirka si aad u xusho cabirka. Si toos ah ha u xarin sida aad u dhaqan tahay. Cabirku wuxuu yeelan karaa kala duwanaansho 2-3cm sababtoo ah cabirka gacanta. Fadlan la soco markaad cabireyso
Trés belle, oo ku qanacsan de mon achat
Tayo fiican, mahadsanid woopshop